Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza indaba egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngokuthi "I-Falcao yaseSerbian". Indaba yethu ye-Luka Jovic Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje.
Luka Jovic Ubuntwana Indaba- Kusukela ebuntwaneni isikhathi kuze kube yimanje
Yebo, wonke umuntu uyazi ngemvelo yakhe phambi komgomo, okuye okwenze ukuba abe omunye wabadlali bebhola abagijimayo kakhulu ebhola laseYurophu. Kodwa-ke, isandla esincane nje sabalandeli bebhola sibheka i-Biography kaLoco Jovic esithandekayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
ULoco Jovic wazalwa ngosuku luka-23rd ngoDisemba 1997 kunina, uSvetlana Jovic nobaba, uMilan Jovic (owayengumdlali wezemidlalo) edolobheni laseBijeljina, eBosnia naseHerzegovina.
UJovic wakhulela ekhaya elihle kakhulu nabazali bakhe nodadewabo emaphandleni aseBatar, okuyi-14 miles eningizimu yeBijeljina. Ngaphambi kokuzalwa kwakhe, abazali bakhe kanye namalungu omndeni wonke bahlukunyezwa ekuqaleni kwe-1990 nokuthatha imali okwenzeka eBijeljina, eBosnia naseHerzegovina.
Luka Jović Abantu bezwe kanye nabanye abantu bezwe babeshushiswa ekuqaleni kwe-1990.
Ukungazinzile kweBosnia neHerzegovina kuvimbela abadlali bebhola ukuba babe nomsebenzi ophumelelayo futhi uyise kaLuka Jovic wayekupheleni kokuthola. Ngokudabukisayo, uMilan Jovic wathola ithuba lokudlala ibhola le-amateur ngePartizan Belgrade, okwenzela indlu yakhe imali encane.
Ukukhula, kwakungekho amathoyizi noma imidlalo, i-football kuphela uJovic ayenayo futhi idlala noyise. Ubaba kaLuka Jovic, uMilan, ngesikhathi esifanayo emsebenzini wakhe ophuthumayo wanquma ukuqhubeka ephila amaphupho akhe ngendodana yakhe.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- I-Education ne-Career Buildup
Ukuba nomama othandekayo webhola nomama osekelayo, kwakungokwemvelo ukuthi uthando lomdlalo omuhle lufakwe ku-Luke Jovic osemusha owayehlale ebonakala sengathi uhamba nobaba wakhe. UMilan wakhuthaza indodana yakhe ukuba igxile emfundweni yebhola ngethemba lokumsiza aqhubeke ephila amaphupho akhe angabonakali.
Luka Jovic- Education and Career Buildup. Isikweletu ku-IG
ULoco Jovic wethulwa emdlalweni ngesikhathi eneminyaka engu-5 ku-2002, unyaka wakhe uthando lwakhe lwebhola lwambona walimaza imfundo yakhe ngenxa yethuba lokuqala umsebenzi.
Ngo-2004, uLuka onenhlanhla ngemuva kokuhlolwa okuphumelelayo wathola ithuba lokubeka isisekelo sakhe somsebenzi kulezi zindawo ezivelele I-Max Maxi. Leli phiko lokuthuthukiswa eBelgrade labantwana abaneminyaka ephakathi kuka-4 no-12. Ngaphambi kokuba athole umdlalo wakhe wokuqala, ubaba kaJovic wamfundisa ukuthi angasebenza kanjani ngezinyawo zombili. Yize uJovic ekuqaleni ethanda inyawo lakhe lokunene, wafunda ukushaya ibhola ngokuzethemba ngesokunxele sakhe.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ithenda kaLuke Jovic ibonakale ngokusuka emdlalweni wakhe wokuqala. Uthi bewazi?… Uthole isicoco emdlalweni wakhe wokuqala, i-feat yabona abaqondisi beqembu bebophezela ukunikeza imali kubaba wakhe ukugqugquzela indodana yakhe ukuthi ibambe amaphuzu amaningi.
UMilan Jovic wanikezwa i-€ 50 ngomgomo ngamunye indodana yakhe eyithole. Wabuye akhokhelwa izindleko zokuhamba zezinhlamvu ze-2000 ezazihlanganisa nokuletha uLuka emzini wakubo waya eBelgrade. Konke lokhu kwenziwa ngoba indodana yakhe ibhekwa njengomdlali wayo oyigugu kakhulu.
Ngomunye wemidlalo kaJovic lapho ephoqa khona imigomo, u-Toma Milićević, umseshi weRed Star, wammangalelwa ngo-Red Star Belgrade. ULoco Jovic wadlula ngemibala endizayo futhi wajoyina iqembu. Ngezansi isithombe sakhe emibala yeqembu.
Ngaphambi kokujoyina iqembu, ubaba kaJovic uke wamqeqeshela u-Partizan, iqembu alidlala kulowo ayebacele ukuba baboshe uJović. U-Partizan unikeze i-Milan 200 euros ngenyanga ngendodana yakhe uLuka Jovic ukuba adlale nabo, kodwa washintsha umqondo wakhe futhi wagcizelela ukuthi umfana wakhe uzohlala ne-Red Star.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela Igama
UJović waqhubeka ekhanyela emaqenjini amasha futhi ngokushesha wathathwa njengento emangalisayo yekusasa. Ekhulela eneminyaka eyishumi nambili, waqala ukukhonta u-Ibrahimovic noDadamel Falcao. Uthi bewazi?… UJovic ubelokhu ebhala amagama ezithombe zakhe ebhakheni ngemuva kweyakhe ku-profile yakhe ye-Facebook.
Ku-28 Meyi 2014, eneminyaka engu-16, uJovic wenza uchwepheshe wakhe nge-Red Star. Ekuqaleni komsebenzi wakhe, waphula umlando kaDejan Stanković njengomncintiswano omncane kunomdlalo wokuncintisana emlandweni weqembu.
I-Luka Jovic Road eya eDeni leNdaba. Isikweletu ku-RedStar naku-IG
Lezi zinkampani ezithandekayo zamehlo amaningi kulo lonke elaseYurophu zilindele isignesha yakhe. Isinqumo sifike ngoFebhuwari ka-2016 lapho uJovic enquma ukuthuthela emadlelweni amasha. I-18 eneminyaka engu-17 ubudala yenzelwe ukuhamba phambili emsebenzini wakhe lapho ejoyina izikhulu zasePutukezi uBenfica.
Ngesikhathi uJovic eseBenfica, kunemibiko yeBhola Leaks eyabonisa isithakazelo esitholakale enkonzweni kaJović, okuyizindaba ezidambisa inkanyezi encane. Kamuva futhi, uJovic waqala ukuqhubekela phambili ekuthuthukiseni futhi lokhu kwabangela ukucindezeleka okukhulu kulo mfana.
I-Luka Jovic Road eya eDeni leNdaba- Lapho i-Going Got Tough. Isikweletu ku-IG
"Nganginenkinga engqondweni, ngangihlala ekhaya futhi ngenza amaphutha amakhulu."
kusho uJovic Ukuhlukumeza umbiko. Umsakazo waseSerbia owake wahamba ephuma e-Red Star e-Red Star wazibonela ekudleni uBenfica B eSegunda Liga.
Ngemuva kokulibaleka eYurophu, iqembu elilodwa lami lapho eqhubeka nokucela iSerbia. Kwakuyiqembu lesiJalimane u-Eintracht Frankfurt owagcina uJović ebusweni beBenfica. Iqembu lamukela ngesikweletu futhi kamuva wenza isivumelwano sakhe sihlala njalo.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Kumlando Wendaba
Ngemuva kwesizini sesibili esibucayi eJalimane, i-styling and forwards yazuza ifomu layo yaba yingxenye yeqembu lokuqala le-Eintracht Frankfurt. U-Jovic waziwa njengomuntu oshaya ibhola ngokumangalisa ngezinyawo zombili. Wabusiswa ngombono wesikhathi esingajwayelekile, owodwa owaletha imigomo emihle nemikhosi emikhulu.
ULuka Jović Uvukela Udumo Indaba. Isikweletu sokudlala i-FORXXUMUMX
UJovic wagxila ekukhuphukeni kwamameteoric okwenza ukuba abe yizindawo ezishisayo kakhulu kunazo zonke eYurophu. TU-Serbian phambili ongu-Real Madrid oshayayo eminyango yakhe usezingeni eliphakeme futhi elinamandla futhi alungele ukuthatha izinyathelo zakhe ezinqoleni zikagesi. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Njengoba uJovic ephakamisa udumo, kuqinisekiswe ukuthi abalandeli bakhe bazobuza ngokuqinisekile umbuzo ovuthayo. Ubani intombi kaLoc Jovic, umfazi noma abanye abazoyibiza, i-WAG ?.
U-Luka Jovic ubelokhu enobudlelwane no-Andjela Manitasevic kusukela ezinsukwini zakhe zobusha be-Red Star Belgrade. Ngezansi isithombe sezinyoni zothando ngesikhathi seminyaka yabo yobudala.
Luka Jovic Ubudlelwane Ukuphila- The Facts Untold
Ukubheka esithombeni sabo ngenhla nangaphezulu, kusobala ukuthi u-Andjela Manitasevic wayengase abe mdala kunendoda yakhe. Ubani onendaba!! Ngempela, uthando lwangempela lubalulekile futhi iminyaka iyinombolo nje.
U-Andjela Manitasevic no-Luka Jovic
ULoco Jovic uyaziwa ngokubonisa ukuthi yena noyintombi yakhe u-Andjela Manitasevic bekhuluma ngokuxhumana nabantu. Ngaphandle kokungabaza, bobabili bajabulela ubuhlobo obuqinile obakhelwe ubungane.
U-Andjela Manitasevic no-Luka Jovic bathanda ukuba nemiphumela yesikhathi esihle
Iqiniso lokuthi bobabili abathandekayo bebelokhu bephola okwesikhashana kushiya ngokungangabazeki ukuthi umshado ungaba yisinyathelo esilandelayo esilandelayo kubo.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi impilo kaLuka Jovic kuyokusiza ukuba uthole isithombe esiphelele kuye. Ukuqala, uJovic unengqondo evulekile. Unethemba elikhulu, umdlandla, nokuthanda kwakhe izinguquko. UJovic uyakwazi ukuguqula imicabango yakhe ibe yizenzo eziphathekayo futhi uzokwenza noma yini ukuze afinyelele imigomo yakhe yomsebenzi kanye nomuntu siqu.
Abadlali bebhola, njengathi thina e-LifeBogger bathanda izifuywayo zethu no-Luka Jovic ngokwakhe akuyona into ehlukile. Ngisho nawe kukhona khona izwi lapho akukho ukwethembeka okusele kumdlalo wanamuhla, akucabangi ubuhlobo obubiwe phakathi kukaJovic, izinja nezinambuzane zakhe.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- LifeStyle Life
I-Jovic inenani elilinganiselwa ku- £ 49.50 m elisho ngokuqondile ukuthi ungumdlali webhola lezinyawo. Kodwa-ke, ekwahluleleni kwe-akhawunti yakhe yezokuxhumana, uhlobo lomdlali webhola lezinyawo ochitha imali yakhe enokuhamba okunethezeka kokubili komhlaba nasemanzini.
I-Jovic, noma kunjalo, ayibonakali ngezimoto eziningi ezithandekayo, ukuphuza, i-swagger namantombazane. Uhlakaniphile ngokuphatha izimali zakhe kulezo zici zokuphila.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Ekhuluma ngemindeni kaLuke Jovic, basuka eYugoslavia emva kokuphela kweMpi Yezwe II yaba yizifundazwe eziyisithupha enye Bosnia ne-Herzegovina. Ubaba kaLuka Jovic, uMilan, ozalelwa e-1975 wayeyilungu le-football lePartizan eliseSerbia.
Ubaba kaLuka Jovic- uMilan Jović. Nostalgija
Ngokungafani nendodana yakhe uLuka, uMilan akazange azuze izindawo ezinhle kakhulu emsebenzini wakhe. Udlale imidlalo ye-82 kuphela ekusebenzeni kwakhe okuyinhloko ekuwina i-Russian Premier League ngonyaka we-2000 ngaphambi kokulenga amabhuzu akhe ku-2003.
UMilan Jovic nomkakhe uSvetlana bakhetha ukuphila okuphakathi kweSerbia naphezu kwengcebo yendodana yakhe evela ebhola. Lolu lwazi lwafika lapho isiJalimane BILD iphephandaba liye lahamba lifuna ukulandelwa kwemikhaya yasekhaya yaseLovovics eSerbia. Bamthola uyise kanye nesimo sabo somndeni esiphakathi.
Ubaba kaLuka Jovic -Papa uMilan. Isikweletu ku isithombe
Ngesikhathi sokuxoxisana noBlid, uMilan Jovic uveze ukuthi wake wadukisa umkakhe uSvetlana ngenxa yokusebenza kwendodana yakhe futhi wazithola ebolekisa kule nqubo. Namuhla, ubaba kaJovic, umama, udadewabo nezihlobo baye bazuza izinzuzo zengozi ezithathwe yinhloko yomndeni.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
Uthi bewazi?… U-November 2015 yinyanga enzima yomndeni kaLuka Jovic. Lesi yisikhathi lapho umndeni uhlupheke ezandleni zomuntu ohlala eLoznica (idolobha laseSerbia) owasongela uLobert Jovic ukuthi uma engamkhokheli imali, "aphule imilenze yakhe".
Luka Jovic Facts Untold. Isikweletu ku-YouTube naku-IG.
Umsolwa utholakale ngemuva kokuba abazali bakaJovic babika lolu daba emaphoyiseni abazinike isikhathi sokuphenya futhi athole isigwebo.
Uthi bewazi?… ULockovic uke waba nenhlekelele nemoto yakhe iMercedes edolobheni lasePatkovača, eduze nendawo yakhe yokuzalwa yaseBijeljina eBosnia naseHerzegovina. Ngengozi, uLobert Jović walimala kodwa ngokushesha wasindiswa ngemuva kokungenelela okusheshayo.
ULocko Jovic ube nomngozi. Isikweletu ku Fenix.
Uthi bewazi?… UJovic une-tattoo esifubeni sakhe, okuye kwagcina abalandeli bezibuza ukuthi ukuthini umbhalo wakhe.
Kusobala ukuthi kubonakala njengesithombe sikaJesu esibonisa inkolo yakhe yobuKristu Orthodox egcwele kakhulu eSerbia. U-Jovic uqale wembula le tattoo ngesikhathi seNdebe yoMhlaba ye-2018 FIFA eRussia.
Uthi bewazi?… UJovic ungumdlali omncane kunabo bonke owake waba ngumdlali wokushaya amaphuzu ayisihlanu emdlalweni owodwa weBundesliga. Umlando owawubanjwe nguRobert Lewandoski. Ngezansi ividiyo yezinhlelo zakhe zokuqopha amarekhodi ezinhlanu kumdlalo owodwa.
Luka Jovic Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Isifinyezo sevidiyo
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Luke Jovic Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Sergej Milinkovic-Savic Indaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Januwari 25, 2019